electric scooters ele ỌZỌ
electric anyịnya igwe ele ỌZỌ
SKATEBOARDS ele ỌZỌ
HOVERBOARDS ele ỌZỌ
ELECTRIC MOTORCYCLES ele ỌZỌ
ngwa mma ele ỌZỌ
Dị ka a ọhụrụ pedaling ụdị electric skuuta, UWITGO S5 adiaha ọhụrụ imewe echiche nke ụgbọ akara technology, nke na ọtụtụ-eji ụgbọala, ya mere, ndị ọrụ nwere ike pedal ala na skuuta ga-abịa n'ime a gosiri ọsọ ọnọdụ. E wezụga, ọ na-onwem na ọhụrụ na nrughari akara ngwa, nke na-eme ka ọ na ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi. Lee igbu n'ihi na ihe atụmatụ.
Shock Absorption N'ihi Nkasi Obi
Ultra-Ìhè & Portable
Ele All scooters
UWITGO S6 bụ ohuru electric skuuta na nwaa maka elu ntachi obi ịnya ọrụ. Nke a imewe ike na elu ike ike batrị, nke nwere ike hụ ịnya anya nwere ike iru ruo 70Km. Dabere na ergonomic imewe Ozizi, reinvent imewe nke foldable oche akpa, nke nwere ike hapụ ọrụ 'ike ọgwụgwụ na-amụba na ahụmahụ nke na-agba skuta. Lee igbu n'ihi na ihe atụmatụ.
Super-elu Ntachi Obi
Dị ka a dị mfe nlereanya, UWITGO A5 bụ Mkpa ọkụ na nta. Aluminum alloy ma ọ bụ carbon eriri ahụ ihe nwere ike họọrọ site ahịa. The arọ nke aluminum alloy skuuta bụ 7.5kg, na arọ ahụ nke carbon eriri bụ naanị 6.3kg. Ọ dị mfe n'ogige atụrụ, mfe na-ebu, na nnọọ mma maka obere njem. Lee igbu n'ihi na ihe atụmatụ.
mkpịsị aka Mee ngwangwa
The UWITGO CF1 ịmụta magnesium alloy ka ya etiti, nke bụ ìhè na ibu na ike na ike, nke a na-eme ka n'ozuzu arọ nke bike 30% ala karịa ndị fọdụrụ nke market.The dum bike enweghị ịgbado ọkụ, nke na-eme ka elu ọzọ siri. Ịmụta na àjà ihe ọṅụṅụ mkpa brushless moto, na-erughị 5% ike na ọnwụ, ọzọ ume ịzọpụta ma belata ike ọgwụgwụ n'oge ịnya.
Motorow-Tech na-mgbe na-akwụ ụgwọ uche nke ukwuu ọhụrụ, àgwà management na ahịa ọrụ. Professional maka electric scooters, e-anyịnya igwe, skateboards na hoverboards.
Ekwentị: +86 18852785815
Debanyere anyị USN Life ala
© Copyright - 2019-2020 : All Rights Reserved. Products Guide - Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile